२५ र २३ बर्षमै श्रीमान श्रीमतीको एउटै चिता, नरुने कोहि भएन – NepalajaMedia
२५ र २३ बर्षमै श्रीमान श्रीमतीको एउटै चिता, नरुने कोहि भएन
February 4, 2021 107
काठमाडौ । बर्दियामा सोमवार भएको एउटा घटनाले जिल्ला शोकमा डुवेको छ । मोटरसाइकल दु’र्घटनामा परी बर्दियाका सन्त वहादुर रिमालका कान्छो छोरा र वुहारीको नि’धन भयो । सानै उमेरमा संसार छोडेका यि जोडीलाई एउटै चितामा राखेर अन्त्यष्टि गर्दा उपस्थित सबैको आँखा रसायो । सोही घटनामा सहभागी भएका स्थानिय प्रदिप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् –
‘जिवनमा पहिलो पटक देखे एक चिता दुई शरिर मर्माहित दुखद घ’टना एउटै चिता मा दम्पति लाई दाग वत्ति, धन्य भगवान निष्टुरि दैवको लिला !! सन्त वहादुर रिमाल का कान्छो छोरा र वुहारिको मोटरसाईकल दुर्घटना वाट दुवै जनाको निधनले हामी सवै स्तव्ध छा‌ै दुव‌ै को स्वर्गमा बाँस होस, मृ’त आ त्माको चिर शान्तिको कामना र शोकाकुल परिवार जन प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौ !’ – प्रदिप ज्ञवाली, वढैयाताल ८ वर्दिया
शनिबार राती ८ बजेको समयमा पूर्वबाट पश्चिम तर्फ जादै गरेको भे ३ प ७८७० नम्बरको मोटर साइकल र पश्चिमबाट पुर्व तर्फ गैरहेको भे १ त ५०९९ नम्बरको काठ लोड गरेको टेक्टर आपसमा ठोकिदा मोटर साइकलमा सवार श्रीमान र श्रीमतिको मृत्यु भएको हो । बढैयाताल गाउँपालिका–७ पचासा बस्ने अर्जुन रिमाल र उहाँको पत्नि ललिता रिमालको मृ’त्यु भएको हो । अर्जुन २५ वर्षका थिए भने उनकी श्रीमती २३ वर्षकी थिईन् ।
घटनाको विषयलाई लिएर बढैयाताल पचासाका स्थानियले चक्का जाम गरेका थिए । टेक्टर धनि र मृतकका पक्ष बिच सम्झौता भई चक्का जाम खुलेको थियो । टेक्टर धनिले मृतक पक्षलाई नियमानुसार क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने र क्षतिग्रस्त मोटर साइकलको पुनः मर्मत गराउने सम्झौतामा चक्का जाम खुलेको जनाईएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न टेक्टर र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
त्यस्तै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१० बासबारीमा स्कुटर दु’र्घटना हुँदा एकजनाको मृ’त्यु भएको छ । को ३९ प ९०७० नम्बरको स्कुर आफैं अनियन्त्रित भएर दु’र्घटना हुँदा युनिका बुढाथोकीको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । त्रियुगा नगरपालिका–९ राजाबास बस्ने १९ बर्षीया युनिकाको उपचारको क्रममा बिराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा मृ’त्यु भएको हो ।
स्कुटर चालक बर्ष १३ का युनिक बुढाथोकी सामान्य घा’इते भएका छन् ।स्कुटर आफैं अनियन्त्रित भएर पल्टिँदा टाउकोमा चोट लागेपछि युनिकालाई उपचारका लागी जिल्ला अस्पताल उदयपुर र पछि न्यूरो अस्पताल बिराटनगर लगिएको थियो । स्कुटर चालकको विराटनगरमा उपचार भईरहेको छ ।
महेन्द्रनगर – कार्तिक–जीवनकालको ४२ औँ वर्षमा अटोचलाइरहेकी कञ्चनपुरकी गोमा (डगौरा) चौधरी अझै जीवन सङ्घर्षमय बित्ने बताउँछिन्।जब, पुर्नवास नगरपालिका अमर बस्तीबाट १६ वर्षको उमेरमा उनको भीमदत्तनगरपालिका २ भाषिका धनबहादुर चौधरी सँग विवाह भयो, कमजोर आर्थिक अवस्थाले जीवन जिउन नसकिने उनमा निराशा छायो। एकातिर घरपरिवार र कोखबाट जन्मिने सन्तानको भविष्यको विषयले औधी चिन्तित उनी ।
आफ्नो जीवनभन्दा सन्तानको जीवन एकदमै सुधारात्मक होस् भन्ने चाहना बोकेर उनले जीवनको सुरुवाती सामान्य साइकल बाट सुरु गरिन्। साइकलमा मालसामान बोक्दै १५ वर्ष उनले वितत गरिन्। उक्त अवधिमा दुई सन्तानकी आमा बनिसकेकी थिइन गोमा ।
साइकलमा मालसामान बोकेर विक्रेताकहाँ पु¥याउदै गर्दा उनका श्रीमानले सामान्य पसल समेत थापेका थिए। पसलको कारोबार र साइकलमा सामान ओसार–पसार गर्दे छोरी सरिता चौधरीलाई महेन्द्रनगर स्थित बालजागृती विद्यालयमा भर्ना गरिन्। सरिताले प्रवेशिका परीक्षा बालजागृती बाटै उत्तीर्ण गरेकी हुन्। छोरा सन्तोष चौधरी महेन्द्रनगर स्थित रेडिएण्ट माध्यामीक विद्यालयमा अध्ययनरत थिए।
दुई सन्तानको अध्ययनको सिलसिला जारीरहेपछि उनले साइकल बाट मोटरसाइकलमा समेत मालसामान बोकिन्। कमाइको बचत बाट उनले ६ वर्ष पहिले अटो रिक्सा पनि खरिद गरेकी थिइन्।
दुई सन्तानको भविष्य उज्ज्वलको कामना सहित उनी निरन्तर काममा खटिइन्। लगत्तै छोरी सरिताले स्टाफ नर्स कोर्स पुरा गरिन्। उनले लोकसेवा मार्फत अनमीमा नाम निकालिन्।
छोरी बाजुरा स्थित बाजुरा स्वास्थ्य चौकीमा सरकारी जागिरे भएको उनी बताउँछिन्। छोरा सन्तोष चौधरी भैरहवा स्थित सिद्धार्थ मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनरत रहेको उनी बताउँछिन्।
जीवनको सान्दर्भिकता अँगाल्दै उनले आफ्नो जीवन सरह सन्तानले पनि कष्ट झेल्न नपरोष भन्ने चाहनाले अझै केही वर्ष अटो रिक्सा चलाउने बताएकी छन्। उनले भनिन्– ‘काम सानो ठुलो हुँदैन, आफुले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाउँदा सन्तान पनि वञ्चित नहोउन् भन्नका लागी अटो चलाउने पेसा अङ्गालेकी हु।’
अटो रिक्सा बाट मासिक ४०–५० हजार कमाइहुने गरेको उनी बताउँछिन्। अटोबाटै सन्तानलाई उच्चशिक्षा देखी जागिरे बनाउने सपना छिट्टै सकार हुने भन्दै उनले हर्ष व्यक्त गरिन्। भुवन भट्टले हाम्रो कालापानीमा लेखेका छन ।
Prevआफ्नो, छोरीको यस्तो रोचक नाम राखे अभिनेत्री अनुष्का र विराटले।
Nextप्रहरीसँगको झडपमा पूर्वमन्त्री यादवको अण्डकोषमा गम्भीर चोट, काठमाडौं पठाइयो
अन्तिम संस्कारमा घ्यु शवको मुखमा हालेर टाउकोमा हान्नुको रहस्य के हो ?
पतिको मृ’त्यु भयो, सर्प चितामा ,स’तीमा सं’लग्न???
ज्योतिषविज्ञान भन्छ : यी महिना जन्मिने व्यक्ति करोडपति (5732)